Gift Factory-China Gift Manufacturers, Suppliers
Umthambo wokuzilolonga umthambo wepolyester eqhelekileyo amagumbi asebenzayo anelastiki yebhanti yengalo epokothweni isingxobo somququzeleli ibhegi yezemidlalo
I-polyester egotywayo yepensile yesingxobo somququzeleli ibhegi yesandla amagumbi amaninzi aneziphu yokuvala iilophu zokugcina ipokotho yebhegi yokuthambisa
I-Camei classical emnyama yesikhumba ye-PU yesikhumba ye-notebook yekhadi ibhegi ye-RFID Ukuvala i-wallet ye-wallet yamakhadi amaninzi kunye nokuvalwa kwe-zipper e-wraround 6 amakhadi e-slots umnikazi wekhadi letyala kwi-ofisi yeshishini lesikolo sabasetyhini
I-Camei slim minimalist ethambileyo yesikhumba ibhegi yesibambi somphathi we-wallet 2 imibala ekhoyo yamatikiti ekhadi letyala amakhadi oshishino amadoda abhinqileyo ukuze asetyenziswe kwiofisi yeshishini imihla ngemihla
Imibala emi-5 ibhegi yokuthenga elungelelanisiweyo ibhegi yohambo lwaselwandle yediaper jonga ngebhegi
I-Vintage slim minimalist ethambileyo ye-PU yesikhumba yesikhumba isikhwama se-mini-case holder isikhwama somququzeleli kunye nokuvalwa kweqhosha Imibala emi-5 ekhoyo yamakhadi okuthenga ngetyala amakhadi oshishino amadoda abasetyhini kwiofisi yeshishini imihla ngemihla.
I-PVC encinci ephathwayo kunye ne-albhamu yekhadi lefoto yesikhumba ye-Fujifilm Instax iifoto zekhamera ezikhawulezayo amagama amakhadi asonga umququzeleli amagumbi e-slot ecacileyo ye-ofisi yeshishini yabasetyhini abasebenzisa isikolo se-ofisi yeshishini imihla ngemihla.
Isitayile esilula saseTshayina esilungelelanisiweyo sePVC & nesibambi sekhadi lokundwendwela lepaspoti elinokuphinda lisetyenziswe elubala lokuphinda lizalise amaphepha umququzeleli kunye nokuvalwa kweqhosha lemagnethi ngeRFID Ukuthintela isipho esikhulu sohambo lweofisi yeshishini imihla ngemihla kubafazi ababhinqileyo.
Ishishini elipinki elimnyama Ipaspoti yesikhumba yePU ibhegi yesibambi sekhadi letyala isibambi sekhadi lelastiki ukuvalwa kwelastiki usiba lwelophu amakhadi slot amagumbi e-ofisi yesikolo soshishino esetyenziswa imihla ngemihla yabasetyhini
Ingxowa enemibala yepolyester yokugcina ibhegi yokuthambisa eneziphu yokuvalwa komququzeleli wengxowa yemali yangasese ingxowa yemali enkulu isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.
Ipaspoti enamagumbi amaninzi ipolyester isibambi hook loop ukuvalwa icala uziphu ipokotho ehlengahlengiswayo yokubeka umtya wekhadi le-ofisi yesikolo soshishino esetyenziswa imihla ngemihla yabasetyhini abangamadoda.
Ipokotho ephathwayo ekhaphukhaphu ecacileyo engaphambili yePVC/ipoly esebenza ngeendlela ezininzi/ikhadi le-pad yesibambi se-ID yesingxobo sebhegi yeziphu enomqheba.